Maxaa kala qabsaday R/wasaare Kheyre & Wasiiro ka cabsi qaba in xilalka laga qaado? – Kismaayo24 News Agency
by admin 11th December 2017 11th December 2017 040
qaar ka mid ah Wasiirada xukuumada Soomaaliya ay kulan la qaateen Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, iyagoo ka dalbaday inuusan go’aan uu isku shaandheyn ugu sameynayo wasiiradda maadaama sida ay sheegeen ay mashruucyo badan qorsheynayaan inay fuliyaan bilaha soo socda.
Wasiiradan ayaa cabsi ka qaba in beelahooda ay Ra’iisul wasaaraha ku cadaadiyaan inuu isku shaandheyn sameeyo maadaama xilalka qaarkood uu muran badan ku jiro.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in Xukuumadda ay wax badan qabatay tan iyo markii la dhisay sidaas darteed aysan hada macquul aheyn in la kala diro wasiirada oo kuwa cusub la magacaabo taasoo dib u dhigi karta hormarka la doonayo in dalka uu ku talaabsado.
Si kastaba ha ahaatee go’aankan ay isla qaateen Ra’iisul wasaare Kheyre iyo wasiiradiisa waxaa ka caroon doono beelo dhowr ah oo cabasho ka ahaa xilalka wasiirada oo ay heystaan, iyagoo doonaya in xilalka la siiyo.
Daawo: Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada Mucaaradka oo Kulan Xasaasi ah la qaatay Hey’adda Culimada Soomaliyeed maxaase kasoo baxay?
Nin SOMALI ah oo Arin Yaab leh ku dhaqaaqay dalka Ingiriiska iyo Maxkamad Xukuntay..
Daawo: Waddooyinka Magaalada Addis ababa oo lagu xardhay calanka quxoon ee soomalia
Tifaftiraha K24 3rd May 2017